Izibane zikhulisa izibane
Izibane zokukhula kwezityalo yimithombo yokukhanya yokufakelwa, ihlala iyimithombo yokukhanya yombane, eyilelwe ukukhuthaza ukukhula kwezityalo ngokukhupha umbane wombane olungele ifotosinthesisi. Izibane zezityalo zisetyenziswa kwizicelo ezingenakho ukukhanya kwendalo okanye ezifuna ukukhanya okongeziweyo. Umzekelo...
Umsebenzi kunye nomgaqo wokukhanya kwesityalo se-LED
Isibane sokukhula kwesityalo se-LED senziwa ngokuhambelana nomthetho wokukhula kwezityalo, owenziwa ngumgaqo welanga. Iphuhlisiwe ngombala wesilinganiselo sesityalo, kwaye inoluhlu olubanzi lwemitha, efikelela kwi-100 LM nge-watt nganye, kwaye ifikelela ngokwenene kwiimfuno zokukhanya okuluhlaza. Ye ...
Indima kunye neempawu zezibane zezibane ze-LED
Isibane sokukhula kwesityalo se-LED ngumthombo wokukhanya osebenzayo osebenzisa i-LED njengomzimba okhanyayo ukuhlangabezana neemeko zokukhanyisa ezifunekayo kwifotosinthesisi yesityalo. Ihlelwe ngohlobo, yeyesithathu isityalo sokukhanya kwesongezelelo sesityalo! Kwimeko yokungabikho kwemini, esi sibane sinokusebenza njenge ...
Ngaba ukukhanya okukhokelwayo kuluncedo?
ngomphathi ku 21-04-27
Isibane sokukhula kwesityalo se-LED ngumthombo wokukhanya osebenzayo osebenzisa i-LED (i-diode light emitting diode) njengomzimba okhanyayo ukuhlangabezana neemeko zokukhanyisa ezifunekayo kwifotosinthesisi yesityalo. Ngohlobo olo, yeyesithathu isizukulwana sesibane sombane sokuncedisa kwizityalo! Ukungabikho kwelanga, t ...
Ungazondla njani izinto zakho zendlu? Ukukhanya kwezityalo ze-LED!
Wonke umntu ukhulisa ezinye izityalo kumakhaya abo, ukuze badlale ngexesha labo kunye nokuhombisa imeko-bume. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu onalo ixesha namandla okunyamekela izityalo. Ukukhanya okungaphezulu kwezibane zezityalo Isibane sesityalo se-LED sisibane esikhethekileyo esinombala othile wobude ...
Ukusetyenziswa kwezibane zokukhula kwezityalo ze-LED kwiindawo ezininzi zokutyala
Izibane zokukhula kwezityalo ze-LED zithatha indawo okanye zongeze inkqubo esele ikho yokukhanyisa okugcina ukukhanya, eyenza ukuba abalimi be-greenhouse bandise isivuno sezityalo, baphucule umgangatho wezityalo, kwaye banciphise ukusetyenziswa kombane mihla le ngokusebenzisa izibane zokukhulisa izityalo ze-LED. Xa kuthelekiswa nezibane zesodium eziphezulu zoxinzelelo oluphezulu, i-li ...
Isampulu yokwenyani yokukhanya kwesityalo se-LED sokusebenza kakuhle?
ngomphathi ku 20-07-31
I-1, ukukhanya kwesityalo se-pearl sokuhambisa ukukhanya kwe-LED ukukhanya kwesityalo, injongo yaso isetyenziselwa ukukhula kwezityalo, imeko efanelekileyo yokukhanyisa, efanelekileyo yokutyala izityalo, inqweneleka kwisityalo sokutyala, ukuzilimela ngokwakho ukukhula okulinganayo, ukukhanya kwesityalo se-Koreho Hayi Ito Noh, Hitoshi Hitoshi ...
ngomphathi ku 20-07-29
Luhlobo olunjani lwendawo ukukhanya kwesityalo se-LED kukulungele kakhulu ukukhula kwezityalo? Ubungakanani bokukhanya kwesityalo se-LED kulunge kakhulu ekukhuleni kwezityalo, iintyatyambo kunye neziqhamo. Ngokubanzi, izityalo zangaphakathi kunye neentyatyambo ziya kukhula zisiba mandundu ngokuhamba kwexesha. Esona sizathu siphambili kukusilela kwemitha yokukhanya. I ...
Yeyiphi indlela yokusasaza ubushushu yokukhanya kwesityalo se-LED?
Yeyiphi indlela yokusasaza ubushushu yokukhanya kwesityalo se-LED? Njengazo zonke iimveliso zombane, izibane zezityalo ze-LED ziya kuvelisa ubushushu ngexesha lokusetyenziswa, nto leyo eya kuthi inyuse ubushushu bemozulu kunye neqondo labo lobushushu. Ukuba ingxaki yokusasaza ubushushu ayikhathalelwa, ayizukuchaphazela kuphela ubomi be-p ...
Ungabandisa njani ubomi obufanelekileyo bezibane zezityalo ze-LED？ 1. Ukukhanya kwesityalo se-LED. Nokuba ngaba ufakelo lokuqala okanye ufakelo oluphindaphindiweyo, kuya kufuneka ulandele amanyathelo okufaka kwincwadi yesikhokelo sesibane ukugqibezela inyathelo ngenyathelo ngenyathelo, kwaye ukhethe ufakelo ...